Maalmaha Xorriyadda Soomaaliya (Qormo) – Radio Daljir
Maalmaha Xorriyadda Soomaaliya (Qormo)
Juunyo 26, 2021 6:53 g 0
Caawa oo kale 26-Juun,1960ki ayey ahayd habeenkii Calan Soomaaliyeed oo xor ahi uu ka dhexbabaday ciid Soomaaliyeed munaasabaddan sareysa ee sharfan waxaa nasiib u yeelatay magaalada Hargaysa, Shacab Soomaaliyeed oo dhiirran, rajjo wanaagsan aadna faraxsan ayaa habeenkaas boqran inadhaha ku nuursaday calankeenna quruxda badan ee 195ka dal ee dunida uusan jirin mid quroo la muunad ahi. Hindisaha calankaas oo kasoo maaxday maskaxdii hal abuurnimadu kudheehnayd ee AHU Mohamed Awale Liban. Waa habeenkii Alle ha unaxariistee Abwaanki Soomaliyeed ee Abdullahi Suldaan Timacadde, uu maansadii quruxda badneyd ee“Kaana Siib, Kanna Saar” uu tiriyey oo ay kamid ahayd “….saaxirkii kala guurraye sarreeyow ma nusqaamow an siduu yahay eego e kaana siib kanna saar….”.
Afar beri kadib ayey Soomaalida u ahayd taariikh kale oo mug weyn 1di-Julaay,1960 oo ay midoobeen labadii gobol ee nacabka gumaystuhu kala haystay ee Waqooyi iyo Koonfur oo aan aaminsanahay inay ceeb inagutahay maanta inaynu ku kala abtirsanno labadaas gumayste.
Halganno gumaysi ladirir oo xiriir ahaa, halyeeyo naftoodii huray, ummad uheellanaa xoriyad ayaa keenay xoriyadda maalmahaan oo kale aynu udabaaldegno sanadkasta.
Muhiimadda xorriyad udirirka iyo halgan-kaan dheeri wuxuu ahaa inaynu dalkeenna, dadkeenna, diinteenna iyo danaheennaba umadax banaanaanno oo aynu noqonno dad iyo dal xor ah, kaas oo cizi iyo sharaf dadkiisu kunool yihiin dunidana waxlaqaybsada. Tan beddelkeeda oo ah sida aynu manta nahay awoowayaasheen dhaawac, gaajo, silic, dhimasho iyo dhibaatooyin kale oo tiro badan uma soomareyn inaynu noqonno qobolo yaryar oo soo kala horjeeda kuwaasoo si dadban loo gumeysto, codowgeenuna danihiisa ku ilaashado kana fushto rabitaankiisa.
Waan hubaa halyeeyadii dalkaan naftooda iyo maalkooda usoo huray hadday maanta noolaan lahayeen markay arkaan qaabka aynu unool nahay iyo hab fikirkeenna liita inay murugo iyo naxdin udhiman-lahaayeen markale.
Gabayadii dardaaranka ahaa ee udammeeyey ee uu tiriyyo AHU halgamaa Yazid Mohamed Abdalle Hassan oo uu Soomaalida kulahadlayey ugana digayey xeeladaha gumaystaha waxaa kamid ahaa “…Dirhamkuu idiin qaybinhayaad, dib u go’aysaane, Dabinbuu idiin qoolayaa waydin dagayaaye, Marka hore dabkuu idinku dhigi, dumar sidiisiiye, Marka xiga dalkuu idinku oran duunyo dhaafsade, Marka xiga dushuu idinka raran sida dameeraaye…”.!
100 sano kadib xiliga gabaygan sare ee Zayid Mohamed ayaad mooddaa qaabkuu tilmaamay inaynu unoolnahay maanta oo aynu joogno 2021.
Maanta marka aad aragno ficilada aan fiicnayn ee kadhacaya hareerahaaga ma’ahan inaad niyad jabtid taasi waa sifada dadka aan hammiga sare lahayn ee xammaasaddu hoggamiso, waa inaynu yeelannaa yididiilo iyo hammi ummadeed oo dheer.
Dhanka kale dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ogaadaan in inbadan oo kamid ah dadka hoggaanka inoo hayya iyo kuwo badan oo doonaya inay hadda inoo qabtaan hoggaanka wadanka inay yihiin dad niyad jabsan xaal kooduna kusoo ururay inay waxay kunoolaan lahaayeen inta nolosha ugahartay inay inaga shaqaystaan taasina waxay kutahay dhabarjab weyn hanka iyo horusocodkeenna ummadnimo.
Sidaa owgeed, muwaadiniinta wanaagsan, niyadda fiican ee tirada badan oo dhalintu hormuudka utahay waxaa laga rabaa inay boorka iskajafaan, midoobaan, door hoggaamineedna yeeshaan, majirto waqti barito ladhaho oo kuuharay, waxaynu ubaahannahay dabaal-dagga maalmaha xorriyadda inuu sanad walba kan kuxiga ka fiicnaado, oo ay jiraan hiigsiyo sanadle ah si isbeddel lataabankaro uu udhaco si-sanadle ah.
30 sano ayeynu kadammaynaa dunida kale oo aynu inagu iskumaqnayn haatan waa inaynu siwadajir ah udhahnaa “intaas kabadan maya” “no more” qofwalba oo Soomaali ah oo maanta nool waxa saaran waajib ah inuu ka shaqeeyo Walaaltinimada, Midnimada iyo Horumarka dalkeenna iyo Dadkeenna Soomaaliyeed.
Marka aad eegto qaab dhismeedka bulshooyinka adduunka, dalalka labada-boqol kudhow ee dunida ee kunaaloonaya midnimada ummadeed, xasiloonida siyaasadeed iyo horumarada bulshada ee kala duwan, waa dad kala nooc-nooc ah dhan walba asal, dhaqan, diin, midab, af iwm lakiin inagu waxaynu nahay dad cajiib ah oo waxwalba wadaaga sifadaan cajiib ka ahi waa wax aynu uga faa’iidaysan karno dhanka wanaagsan, walaal-tinimadeenna isir wadaagga ah oo lagu daray maskax furnaanta Soomaalida ilaahay hibada u siiyey ee dadbadani inoo qireen waxay inoo horseedi kartaa horumar degdeg ah.
Waa muhiim inaynu noqon bulsho xammaasadaysan oo kaliya sida aynu samayno ayaamaha xoriyadda, xiliyada doorashooyin iwm taas beddelkeeda waa inaynu noqonnaa ummad leh aragti fog iyo ujeedooyin nololeed. Waa inaynu lafagurnaa (taxliilinaa) waxyaabaha kadhacaya hareeraheenna, qaab isbeddelka dunida iyo saamaynahooda. Inagoo niyadda ku haynayna in inaga iyo ubadkeenuba xaq uleenahay inaynu kunoolaano wadjir ummaddeed, nabad iyo nolol sharfan oo horumarsan.
Ugudamayntii, Midnimadii ummadda soomaaliyeed ee 1960ki waxa ay ahayd aragti iyo yididiilo wanaagsan oo la rabay Soomaalida ku nool bariga Afrika oo dhammi in ay ku midoobaan hal dawlad oo hal calan leh. Taas maanta mahayno lakiin waa rajjo uu leeyahay qofwalba oo muwaadin Soomaaliyeed ahi, wadajirka, isu keenidda iyo midaynta ummadda Soomaliyeed waa wax lama taabtaan ah oo aytahay inaynu dhammaanteen kawada shaqayno.
Tafaraaruq qarnigan 21’aad ah ee dadka qaar maanta uxadraynayaan waa inaynu u wada aragno liidnimo, aragti aad ugaaban iyo horseedka gumaysi cusub. Hankeennu waa inuu ahaado Soomali leh hal dal oo awood badan kuleh gobolka bariga Afrika dunida wax laqaybsada.
W/Q: Ahmed Hussein Suleiman
Qormooyinka Daljir 56 Wararka 26385